Otu esi edozi ọkwa olu dị iche iche maka ngwa Bluetooth | Gam akporosis
Otu esi edozi ọkwa olu dị iche iche maka ngwa Bluetooth gị ọ bụla
Ekele dịrị onye gafere rụọ ọrụ na teknụzụ Bluetooth, oge ọ bụla ọ na - eme obere oriri na ndụ batrị nke ekwentị mkpanaaka. Nke a mere ka ọ theụ gbasaa n'etiti ndị nrụpụta ma anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ụdị atụmatụ niile dị ka ijikọ ekwentị na ụgbọ ala, ọkà okwu, akụrụngwa maka ụlọ ma ọ bụ ọbụna keyboard a.
Ngwaọrụ Bluetooth anyị jikọtara, nke nwere ike bụrụ ihe ọgbaghara mgbe ị na-agbanwe ọkwa nke ọ bụla n'ime ha, yabụ na-atọ ụtọ na anyị nwere ụzọ ụfọdụ anyị ga-esi jikwaa ha niile ka anyị wee ghara ịla n'iyi. Ewezuga eziokwu ahụ na oge ọ bụla ekweisi jikọtara, ekwentị na-ewepụta ọkwa olu dị mma. Ya mere, anyị ga-agbanye olu ọ bụla abụọ site na atọ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gosi gị otu tọọ ọkwa olu dị iche iche na akpaghị aka oge ọ bụla ị jikọrọ ngwa Bluetooth.
1 Ihe mbu: anyi wunye Bluetooth Volume Control
2 Nzọụkwụ abụọ: ịtọ ntọala olu maka ngwa Bluetooth gị
Ihe mbu: anyi wunye Bluetooth Volume Control
Anyị ga-ebu ụzọ wụnye ngwa ngwa Mpịakọta Bluetooth. Ngwa a ga-abu otu na-enye gị ohere ịtọ ọkwa ọkwa ndabara maka ihe ọ bụla nke ngwa Bluetooth ị jikọtara na ekwentị gị. Nwere ike ibudata ya n'efu na Playlọ Ahịa Google n'enweghị nsogbu:
Njikwa Olu Bluetooth
Developer: agba ọchịchịrị
Enwere ike itinye ya na Android 5.0 na elu, enweghị nsogbu maka ọtụtụ ngwaọrụ gam akporo ugbu a.
Nzọụkwụ abụọ: ịtọ ntọala olu maka ngwa Bluetooth gị
Ugbu a, anyị na-emeghe ngwa ma hụ na njikọ Bluetooth na-arụ ọrụ na ekwentị. Ugbu a, anyị ga-ahụ ndepụta nke ngwa ngwa Bluetooth niile anyị jikọtara na ngwaọrụ gam akporo anyị. Nke ọ bụla n'ime ụzọ mbata ahụ ga-enwe slid abụọ. Otu, nke dị elu, bụ maka ngbanwe olu mgbasa ozi nke ngwaọrụ ahụ, ebe nke dị ala maka ịgbanwe ụda maka oku na-abata. Anyị na-aga na ndepụta ahụ na-ahọpụta ngwa ọ bụla iji tinye ọkwa ọkwa dị iche iche.
Site n'oge a, Nke abụọ ma ọ bụ abụọ anyị jikọtara otu nke Bluetooth ngwa na ekwentị, olu mmịfe ga-egosi na ihuenyo na ị nwere ike na-akpaghị aka ịgbanwe ya ka ndị chọrọ larịị maka na ahụ ngwa.
Enweghị ihe ọzọ a ga-eme, naanị chere sekọnd ole na ole mgbe ijikọ ngwaọrụ Bluetooth, wee tinye ọkwa ọkwa ziri ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi edozi ọkwa olu dị iche iche maka ngwa Bluetooth gị ọ bụla
You nwere ike ijikwa kọntaktị gị niile na Google Ndi ana-akpogharịrị
Onye enyemaka Google nwere ike icheta ihe na Allo, Pixel na Home